Noho ny fiaraha-miasa teo amin’ny mpitandro filaminana sy ny mponin’Alaotra no nahatafiditra ity dahalo mpampihorohoro ity tao anatin’ny haraton’ny polisy, tamin’ny herinandro teo. Anisan’ny ati-doha nikotrika sy nanatanteraka ny fahaverezana lelavola 9 tapitrisa ariary sy 700 dolara Amerikanina, 1.000 yen japoney ary finday avo lenta roa, tamin’ny 4 mey teo, tao Avaradrova Ambatondrazaka. Araka ny fampitam-baovaon’ny mpitandro filaminana, efa mpamerin-keloka noho ny raharaha fakana an-keriny ny volana aogositra 2014, tany Soalazaina Ambatondrazaka ihany koa i
Mamy. Mbola manohy ny fikarohana ireo fitaovam-piadiana fampiasan’ity jiolahy ity amin’ny alalan’ny famotorana sy ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana. Karohana ihany koa ireo mpiray tendro aminy. Manao ny ainy tsy ho zavatra ho fampandriana ny fahalemana any amin’ny faritra ireo mpitandro filaminana.